Badda Baltic | Wararka Safarka
Maria | | Getaways Yurub, General, safarka
Sawir | Pixabay
Marka la barbardhigo biyaha diirran ee cufnaanta badan ee Badda Dhexe, Badda Baltic waxay umuuqan kartaa meel qabow, fog oo aan la aqoon. Si kastaba ha noqotee, biyaheeda waxay maydhaan xeebaha sagaal dal oo ku yaal Waqooyiga Yurub iyo Bartamaha Yurub. kuwaas oo hoy u ah xeebo qarsoon oo qurux badan, khasnado qarniyadii dhexe oo umuuqda sheeko sheeko iyo waliba jasiirado, buundooyin iyo magaalooyin kanaal oo mar ahaan jiray caasimadaha ganacsiga aduunka.
1 Stockholm (Iswiidhan)
2 Helsinki (Finland)
3 Pärnu (Estonia)
4 Riga (Latvia)
Marka loo fiiriyo goobteeda gaarka ah, Stockholm waxay ka kooban tahay 14 jasiiradood oo ku yaal bad gacmeed ay gabbaad ka dhigato badda Baltic oo ay ku xiran yihiin 50 buundo Maanta waa magaalo casri ah oo caadeysatay tikniyoolajiyadda, naqshadeynta, moodada iyo cunnada xun, laakiin magaaladeedii hore, Gamla Stan, waxay nooga sheegeysaa waqtiyadii hore ee la soo maray iyada oo loo marayo jidadkeeda isku xira, dhismayaasha taariikhiga ah ee qarniyadii XVIII iyo XIX, dukaamadeeda, kaniisadaha iyo dukaamada soo jiidashada leh.
Stockholm waxay ku daboolan tahay lugta. Socodka aan ujeedka lahayn iyada oo la marayo jidadkeeda iyo in la ogaado booqashooyinka caadiga ah sida qasriga boqortooyada, Hall-ka Magaalada iyo munaaradda Stadshuset oo aad ka heysato aragtida ugu fiican ee magaalada, kaniisada Saint Nicholas, kan xagaaga iyo meelo kale oo badan.
Xarunta xudunta u ah Stockholm waa Vasterlanggatan, waa waddo firfircoon oo ay ka buuxaan makhaayado, qolal gacmeedyo iyo dukaamo xusuusin ah oo aad ku baran karto gastronomy-ka maxalliga ah kuna raaxeysan karto jawiga magaalada. Markaa waad dib u bilaabi kartaa dariiqa aad ku booqan karto qaar ka mid ah matxafyada ugu caansan magaalada Stockholm sida Abba museum ama Vasa museum. Hadaad waqti heysato sidoo kale waxaad booqan kartaa jasiiradda cagaaran ee Djurgarden ama waxaad booqan kartaa dhismaha ugu ballaadhan ee meeraha ku yaal. Waxyaabaha cajiibka ah ee meeshani waa in wajigiisa awgood aad ugu kici karto galaas gondola ah.
Caasimada Finland waxay si xarrago leh ula midoobeen Baltiga waxayna ku fadhiyaan fowdo qarka, jasiiradaha iyo coves raadraaca xeeb aad u adag.
Helsinki siyaabo badan ayaa lagu ogaan karaa, laakiin waxyaabaha ugu fiican ayaa ah in la kireeyo baaskiil isla markaana la baxo oo la baaro jidadkeeda iyada oo la adeegsanayo. Mid baa dhihi kara soo jiidashada magaaladan Finnishka waxay ku jirtaa hiddaheeda iyo taariikheed: Orthodox Uspenski Cathedral, Kaniisadda Protestant ee ku taal Senate Square, dhismaheeda Art Nouveau ama matxafyadeeda, halkaasoo dhaxalka qaran lagu ilaaliyo.
Magaaladaani waxay leedahay qolal badan oo qolalka kala duwan leh iyo in ka badan 50 matxaf oo loogu talagalay dhammaan dhadhanka noocyadooda sida Matxafka Taariikhda Dabiiciga ah ama Madxafka Ehrensvärd, oo ku yaal hoyga hore ee taliyayaasha qalcadda Suomenlinna, taas oo ina tusaysa sida nolol maalmeedka ay u ahayd Finnishku dib ugu laaban qarnigii XNUMXaad. Booqashada kale ee muhiimka ah ee Helsinki waa Suomenlinna, waxa loogu yeero qalcadda Finland.
Meel aad u qaas ah oo lagu arko booqashada caasimadda waxay ku taal bartamaha, barxadda suuqa ee loo yaqaan Kauppatori. Meel dalxiis oo aad u wanaagsan oo ay ku yaalliin guryo ubax leh iyo cunto raqiis ah halkanna doomaha iyo doonyaha jasiiradaha ayaa ka taga
Waxay ku taal xeebta Badda Baltic, Pärnu waa caasimadda xeebta iyo magaalada loo dalxiis tago ee Estoniya. Xilliga jiilaalka waa magaalo deggan oo ay booqdayaashu uga faa'iideystaan ​​kalluumeysiga ama barafka. Si kastaba ha noqotee, maalmaha qorraxda ee cimiladu wanaagsan tahay, qoysaska oo idil oo ka kala yimid daafaha dalka iyo xitaa kuwa deriska la ah Ruushka ama Finland ayaa yimaada Pärnu si ay u jiifaan qorraxda, u ciyaaraan isboorti ama ay si fudud u nastaan ​​iyagoo u bogaya muuqaalka quruxda badan.
Socotada kale waxay yimaadaan Pärnu iyagoo raadinaya dalxiis fayoqab ah oo ah meelaha loo dalxiis tago ee ah meelaha loo dalxiis tago Dad badan ayaa doonaya daaweynta kuleylka ku saleysan dhoobada ee loo yaqaan 'peon Estonian' oo halkan lagu dabaqo. Waxay ka kooban tahay isku dar biyo iyo xaafad leh waxyaabo faa iido badan u leh jirka.
Kama bixi kartid Pärnu adigoon booqan jasiiradda deriska la ah Muhu, oo laba saacadood iyo badh u jirta bas. Halkan waxaad ku arki kartaa Estonia waqtiyadii la soo dhaafay: oo leh guryo caadi ah iyo kaniisadda Muhu, oo ah kan ugu da'da weyn dalka.
In kasta oo ay leedahay xarun taariikhi ah oo ay UNESCO ku dhawaaqday inay tahay Goob Dhaxal Adduun, haddana tan ugu weyn jamhuuriyadaha Baltiga waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan ee qaaradda. Ma ogtahay inay tahay magaalada ugu farshaxanka badan nouveau meeraha? In ka badan 700 dhismayaal casriyeysan!
Habka ugu wanaagsan ee lagu baran karo Riga waa inaad ku dhex socotid waddooyinka xarunta la yiraahdo Vecriga, in kasta oo la burburiyey oo markii dambe dib loo dhisay horraantii 90-meeyadii, waxay haysaa dhammaan soojiidashadeeda qarniyadii hore.
Halkan waxaan ka heli karnaa meel loo yaqaan Rastlaukums, fagaaraha dawladda hoose, oo qarniyadii dhexe loo isticmaali jiray suuq ahaan inkasta oo tartamada, tartamada iyo noocyada kale ee dabaaldegyada sidoo kale la abaabulay. Fagaarahaan agtiisa waxaa ku yaal Guriga Madow ee iska leh ganacsatada Riga. Waxaa lagu burburiyey Dagaalkii Labaad ee Adduunka dibna loo dhisay 1999.
Waxaa jira waxyaabo badan oo lagu arki karo Riga. Tusaalaha kale ee tan waa Riga Castle oo laga soo bilaabo qarnigii saddex iyo tobnaad, halkaas oo uu ku yaal guriga Madaxweynaha Latvia. Ma iloobi karno fagaaraha ugu weyn magaalada hore, taas oo ah, kan cathedral halkaasoo macbadka ugu weyn ee qarniyadii dhexe ee Baltic uu ku yaallo waana taallo dhisme qaran.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Badda Baltic